Iko akwụkwọ na-agbagọ agbagọ, iko akwụkwọ ndụ biodegradable, mkpuchi anụ ụlọ - Futur
Ị ga-eche ihu ụlọ ọrụ kachasị ntụkwasị obi na otu.
Site n'iji ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ anyị, ihe ngwọta ọhụrụ na ịzụ ahịa ahịa, anyị nwere ike inyere gị aka inweta òkè ahịa na ịzụlite azụmahịa gị.Mmepụta anyị na nrụnye nrụnye anyị na-eme ka a hụ na ị na-enwe ihe ngwọta kachasị ọnụ mgbe niile.
Futur Technology- onye na-ere ahịa & onye na-emepụta nkwakọ nri na-adịgide adịgide na China.Ebumnuche anyị bụ ịmepụta ngwọta nkwakọ ngwaahịa na-adigide & compostable nke na-abara ụwa na ndị ahịa anyị uru.
Anyị na-eji akụrụngwa mmeghari ohuru dị ka ihe ndị PLA mere site na ọka-ọka, akpa, bọọdụ mpempe akwụkwọ..wdg.
Iji mepụta ngwaahịa ọhụrụ, ọ na-achọ teknụzụ ọhụrụ usoro ọhụrụ iji mee ka ọ mee.Anyị na-agbasi mbọ ike ma na-agbalị ime nke ọma kwa ụbọchị.
Ọ na-agbanwe gaa na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ & na-adigide n'ụwa niile.Site na ndị mmadụ na teknụzụ ọhụrụ, anyị na-eme ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ na-ezute ngwa ọhụrụ nke ndị ahịa kwa ụbọchị.
FUTUR nkwakọ ngwaahịa compostable na-ejedebe na mkpofu ahịhịa, ha ga-akụri ngwa ngwa karịa iko osisi ka ha sitere na osisi na ha agaghị ewepụ plastik na-emerụ ahụ n'azụ.
Otu iko akwụkwọ mgbidi
Ogologo oge ndu maka China 5oz Custom Printing ...
Ọnụ ahịa kacha mma na China The Eco-Friendly Biodegrada...
Mpempe akwụkwọ square / akụkụ anọ
Ndị na-ebupụta igbe igbe nwere ike imebi ihe...
Ndị na-emepụta Plastic Cutlery Sup...
OEM Supply China Biodegradable Compostable Spou...
Compa akwụkwọ mpempe akwụkwọ Kraft enwere ike mkpofu...
Nri na-adịgide adịgide, Ebe T.
Oge erugo ileta C...
Mụta nkwakọ ngwaahịa na-adịgide adịgide site na...